နှာစေးရခွငျး အကွောငျးရငျးမြား - ApannPyay Media
နှပျက နှာခေါငျးတှငျးရှိ Mucous Membrane အမွှေးပါးလေးက ထုတျပေးပွီး အဆုတျထဲကို ဖုနျ ဝတျဆံ နဲ့ ဘကျတီးရီးယား တှမေဝငျအောငျ ကာကှယျပေးတဲ့ အရာတဈခုပါ. နတေို့ငျး ခြှဲ သလိပျ နှပျတှေ ထုတျနပေမေယျ့ ကြှနျုပျတို့က သတိမထားမိပါဘူး. တံတှေးနဲ့ အရညျတှနေဲ့ ရောပွီး လညျခြောငျးထဲကို စီးကသြှားလို့ပါ.နှာစီးတာ နှာသီးရောငျတဲ့အခါ နှပျတှပေိုထှကျတာ အားလုံးလညျး သိပွီးဖွဈမှာပါ. ဒါဆို ဒေါကျတာဇီဝက က ထုံးစံလေးတိုငျး နှာစေးရခွငျး အကွောငျးတှေ ပွောပွသှားပါမယျ…
အိမျပွငျကော အတှငျးမှာပါ ဖွဈတတျပွီး ဖွဈရခွငျးအကွောငျးတှကေတော့ ဖုနျမှုနျ့ ဝတျဆံ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျလေးတှပေါဝငျပါတယျ. လက်ခဏာတှကေ နှာခမြေယျ ခေါငျးကိုကျမယျ. လညျပငျးနာတာတှဖွေဈပါတယျ. အဲ့ဒီ ရှူလိုကျတဲ့ သေးသေးလေးတှကေ လညျး အသကျရှူရငျး နှာခေါငျးတှငျးဝငျပွီး ခြှဲထခွငျးနဲ့ နှာရညျယိုခွငျးတို့ဖွဈစပေါတယျ.
အဖြားကလညျး နှာခေါငျးတှငျးရှိmucous membrane ကိုရောငျစပွေီး နှပျတှအေမြားကွီးထှကျစပေါတယျ. နှာစေးစတေဲ့ပွငျ နှာပိတျတာပါတဈခါတညျးဖွဈပါတယျ.
ပုံမှနျအဖြားရဲ့ ဆကျတှဲရောဂါက နှာပိတျခွငျးဖွဈပါတယျ. နှာသီးရောငျတာကနေ နှာပိတျတာဖွဈပွီး နှပျတှလေညျး ပိုထှကျစပွေနျပါတယျ. နှာပိတျတာကနေ ခေါငျးကိုကျတယျ. နှာရိုးကွီးနာနတောတှဖွေဈတတျပါသေးတယျ.
တဈခြို့သူတှကေ နှာ တဈဖကျပဲ ပိတျတတျပါသေးတယျ. Deviated Spetump က မှေးကတညျးက ပါလာလို့ဖွဈနိုငျပွီး နှာခေါငျးမှာ ထိခိုကျဒဏျရာရလို့လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ.
နှာပိတျတာနဲ့ နှာသီးရောငျတာ တဈလှညျ့စီဖွဈတတျပွီး နှာယိုစပေါတယျ.
တုပျကှေးက ကူးစကျရောဂါဖွဈပွီး ဖြားတာနဲ့ နှာစေးတာဖွဈပါတယျ.
တဈခြို့ဆေးဝါးတှကေ ဘေးထှကျဆေးကြိုးအနနေဲ့ နှာစေးစပေါတယျ.
ရောငျတာကွောငျ့ပဲဖွဈပွီး ပနျးဝတျဆံ အမှုနျတို့ကွောငျ့ ဖွဈရတဲ့ hay feverနဲ့ တူတူပါပဲ. အကွောငျးရငျး မသိပမေယျ့ hisatamine နဲ့ allergenကွောငျ့ဖွဈရတာတော့မဟုတျပါဘူး. တဈခြို့ဆေးတှကွေောငျ့
nonallergic rhinitis ဖွဈတတျပမေယျ့ တခွားဖွဈရတဲ့ အကွောငျးတှကေတော့ အပူခြိနျပွောငျးလဲမှုကွောငျ့, နရေောငျစူးစူးကွောငျ့ နဲ့ တခွားမသိနိုငျတဲ့ ရောဂါအခွအေနတေဈခုခုရှိနလေို့လညျးဖွဈတတျပါတယျ.
ဟျောမုနျးမညီမြှတာက နှာသီးရောငျတာနဲ့ နှာခေါငျးတှငျးရှိသှေးကွောလေးတှကေို ကယျြစပေါတယျ. အပြိုပျေါ လူပြိုပျေါဝငျခြိနျမှာ ဖွဈပွီး ကိုယျဝနျခွားဆေး တားဆေး နဲ့ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲမှုဖွဈစတဲ့ ကုသမှုတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ.
ခွောကျနတေဲ့လကေ အသားပါမက နှာအတှငျးပါ ခွောကျသှစေ့ပေါတယျ. နှာစေးတာကိုပိုမိုဆိုးဝါးစပေါတယျ. အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာရေ အပူခြိနျမွငျ့တကျမှုကွောငျ့ အိမျတှငျးလပေူတှေ ဝငျလာတာကနေ ဖွဈနိုငျပါတယျ. ဒါကွောငျ့ အိမျတှငျး humidifier လေးသုံးပွီး ဆောငျးတှငျးအပွငျထှကျရငျ လညျစီး လေးဝတျ ပါးစပျနဲ့ နှာခေါငျးလေးအုပျပွီး သှားလာပါ.
mucous membranes ရောငျတာကနေ နှာခေါငျးတှငျးမှာ အသီးလေးတှေ ကွီးကွီးလာပါတယျ. နှာစေး နှပျထှကျတာကနေ နောကျပိုငျးမှာ အနံ့တောငျမရနိုငျတာ ခေါငျးကိုကျတာတှေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈလာနိုငျပါတယျ
နှာရညျ ထညျ့လိုကျတာက နှာသီးရောငျတာ သကျသာစပေမေယျ့ အမြားကွီး သုံးမိရကနေ ပိုဆိုးဝါးလာနိုငျပါတယျ.ရရှေညျစှဲသုံးခွငျးက နှာခေါငျးပိတျတာကို နာတှာညျဖွဈစပေါတယျ
(၁၂) အသကျရှူ လမျးကွောငျးမှာ ဗိုငျးရပျဈပိုးရှိနခွေငျး
ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှမှော အဖွဈမြားပွီး ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ နှာစေး နှပျထှကျတာဖွဈပါတယျ.
အစပျစားတာကလညျး နှာယိုတာဖွဈပါတယျ. လူတိုငျးဖွဈဖူးပါတယျ.
မီးခိုးငှကေ့လညျး နှာယိုစတေဲ့ အကွောငျးတဈခုထဲပါတယျ.
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့ခြိနျဖွဈပမေယျ့ မှေးဖှားပွီးခြိနျဆိုရငျတော့ ပြောကျသှားပါတယျ. ခေါငျးကို ၃ဝဒီဂရီမော့ပွီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ လုပျပေးတာက ဝဒေနာသကျသာစပေါတယျ။
နှပ်က နှာခေါင်းတွင်းရှိ Mucous Membrane အမြှေးပါးလေးက ထုတ်ပေးပြီး အဆုတ်ထဲကို ဖုန် ဝတ်ဆံ နဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေမဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ. နေ့တိုင်း ချွှဲ သလိပ် နှပ်တွေ ထုတ်နေပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့က သတိမထားမိပါဘူး. တံတွေးနဲ့ အရည်တွေနဲ့ ရောပြီး လည်ချောင်းထဲကို စီးကျသွားလို့ပါ.နှာစီးတာ နှာသီးရောင်တဲ့အခါ နှပ်တွေပိုထွက်တာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ. ဒါဆို ဒေါက်တာဇီဝက က ထုံးစံလေးတိုင်း နှာစေးရခြင်း အကြောင်းတွေ ပြောပြသွားပါမယ်…
အိမ်ပြင်ကော အတွင်းမှာပါ ဖြစ်တတ်ပြီး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကတော့ ဖုန်မှုန့် ဝတ်ဆံ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်. လက္ခဏာတွေက နှာချေမယ် ခေါင်းကိုက်မယ်. လည်ပင်းနာတာတွေဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီ ရှူလိုက်တဲ့ သေးသေးလေးတွေက လည်း အသက်ရှူရင်း နှာခေါင်းတွင်းဝင်ပြီး ချွှဲထခြင်းနဲ့ နှာရည်ယိုခြင်းတို့ဖြစ်စေပါတယ်.
အဖျားကလည်း နှာခေါင်းတွင်းရှိmucous membrane ကိုရောင်စေပြီး နှပ်တွေအများကြီးထွက်စေပါတယ်. နှာစေးစေတဲ့ပြင် နှာပိတ်တာပါတစ်ခါတည်းဖြစ်ပါတယ်.
ပုံမှန်အဖျားရဲ့ ဆက်တွဲရောဂါက နှာပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. နှာသီးရောင်တာကနေ နှာပိတ်တာဖြစ်ပြီး နှပ်တွေလည်း ပိုထွက်စေပြန်ပါတယ်. နှာပိတ်တာကနေ ခေါင်းကိုက်တယ်. နှာရိုးကြီးနာနေတာတွေဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်.
တစ်ချို့သူတွေက နှာ တစ်ဖက်ပဲ ပိတ်တတ်ပါသေးတယ်. Deviated Spetump က မွေးကတည်းက ပါလာလို့ဖြစ်နိုင်ပြီး နှာခေါင်းမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
နှာပိတ်တာနဲ့ နှာသီးရောင်တာ တစ်လှည့်စီဖြစ်တတ်ပြီး နှာယိုစေပါတယ်.
တုပ်ကွေးက ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပြီး ဖျားတာနဲ့ နှာစေးတာဖြစ်ပါတယ်.
တစ်ချို့ဆေးဝါးတွေက ဘေးထွက်ဆေးကျိုးအနေနဲ့ နှာစေးစေပါတယ်.
ရောင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီး ပန်းဝတ်ဆံ အမှုန်တို့ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ hay feverနဲ့ တူတူပါပဲ. အကြောင်းရင်း မသိပေမယ့် hisatamine နဲ့ allergenကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး. တစ်ချို့ဆေးတွေကြောင့်
nonallergic rhinitis ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တခြားဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်, နေရောင်စူးစူးကြောင့် နဲ့ တခြားမသိနိုင်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုရှိနေလို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်.
ဟော်မုန်းမညီမျှတာက နှာသီးရောင်တာနဲ့ နှာခေါင်းတွင်းရှိသွေးကြောလေးတွေကို ကျယ်စေပါတယ်. အပျိုပေါ် လူပျိုပေါ်ဝင်ချိန်မှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ခြားဆေး တားဆေး နဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စတဲ့ ကုသမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်.
ခြောက်နေတဲ့လေက အသားပါမက နှာအတွင်းပါ ခြောက်သွေ့စေပါတယ်. နှာစေးတာကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပါတယ်. အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာရေ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့် အိမ်တွင်းလေပူတွေ ဝင်လာတာကနေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် အိမ်တွင်း humidifier လေးသုံးပြီး ဆောင်းတွင်းအပြင်ထွက်ရင် လည်စီး လေးဝတ် ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းလေးအုပ်ပြီး သွားလာပါ.
mucous membranes ရောင်တာကနေ နှာခေါင်းတွင်းမှာ အသီးလေးတွေ ကြီးကြီးလာပါတယ်. နှာစေး နှပ်ထွက်တာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ အနံ့တောင်မရနိုင်တာ ခေါင်းကိုက်တာတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်
နှာရည် ထည့်လိုက်တာက နှာသီးရောင်တာ သက်သာစေပေမယ့် အများကြီး သုံးမိရကနေ ပိုဆိုိးဝါးလာနိုင်ပါတယ်.ရေရှည်စွဲသုံးခြင်းက နှာခေါင်းပိတ်တာကို နာတှာည်ဖြစ်စေပါတယ်
(၁၂) အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေခြင်း
ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နှာစေး နှပ်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်.
အစပ်စားတာကလည်း နှာယိုတာဖြစ်ပါတယ်. လူတိုင်းဖြစ်ဖူးပါတယ်.
မီးခိုးငွေ့ကလည်း နှာယိုစေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုထဲပါတယ်.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပေမယ့် မွေးဖွားပြီးချိန်ဆိုရင်တော့ ပျောက်သွားပါတယ်. ခေါင်းကို ၃၀ဒီဂရီမော့ပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးတာက ဝေဒနာသက်သာစေပါတယ်။
အပူဒဏျ ခံနိုငျစသေော မွနျမာ ရိုးရာနညျး